नयाँ बजेटमा कुन क्षेत्रले कति पाए ?
काठमाडौं । संघीय सरकारले पहिलोपटक संघीय संसदमा बहुप्रतिक्षित बजेट पेश गरेको छ । बाम गठबन्धनको सरकारले मंगलबार (आज) आगामी आर्थिक वर्षको (२०७५/७६) लागि १३ खर्ब १५ अर्ब १४ करोड रुपैयाँको बजेट (वार्षिक आय— व्यय विवरण) पेश गरेको छ । चालू वर्षभन्दा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा धेरै ठुलो आकारको अन्तर छैन । सम्पूर्ण बजेटमा चालुतर्फ ८ खर्ब ४५ अर्ब ४४ करोड ७५ लाख (६४.३ प्रतिशत), पूँजीगततर्फ ३ खर्ब १३ अर्ब ९९ करोड ८२ लाख (२३.९ प्रतिशत) र वित्तिय व्यवस्थातर्फ १ खर्ब ५ अर्ब ७१ करोड ६० लाख (११.८ प्रतिशत) छुट्याइएको छ । सरकारले यसको खर्च जुट्ने स्रोत पनि पेश गरेको छ । बजेटको स्रोत भनेको राजस्व, आन्तरिक ऋण र बाह्य ऋण तथा अनुदान हो । ८ खर्ब ३१ अर्ब ३१ करोड ८० लाख राजस्वबाट, वैदेशिक अनुदानबाट ५८ अर्ब ८१ करोड ५ लाख, वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब ५३ अर्ब र आन्तरिक ऋणबाट १ खर्ब ७२ अर्ब रुपैयाँ व�...
काठमाडौँ — सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि १३ खर्ब १५ अर्बको बजेट ल्याएको छ । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले मंगलबार संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा आर्थिक वर्ष २०७५/७६ का लागि १३ खर्ब १५ अर्बको आय व्ययको विवरण (बजेट) प्रस्तुत गरेका हुन् । सरकारले राजश्वबाट ८ खर्ब र वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब २ अर्ब उठाउने लक्ष्य लिएको छ। ...
शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर ७ लाख रुपैयाँ ऋण दिइने
काठमाडौँ — सरकारले शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर ७ लाख रुपैयाँ ऋण दिने भएको छ । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले मंगलबार बजेट प्रस्तुत गर्दै शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर ५ प्रतिशत ब्याज दरमा ७ लाख रुपैयाँसम्म ऋण दिने उल्लेख गरे । सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ । यसका लागि सरकारले ३ अर्व १० करोड रुपैया बजेट छुट्टाएको छ । सार्वजनिक रोजगारी प्रत्याभुतिको लागि छुट्टै विद्येयक संसदमा पेश गर्ने भएको छ । सरकारले रोजगार सुचना केन्द्र स्थापना, समान कामको लागि सामान ज्याला, आन्तरीक श्रम निरिक्षण गर्ने भएको छ । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका कामदारको सीप परीक्षण गरि उद्यम गर्नको लागि १० लाखसम्म ऋण दिने योजना ल्याएको छ । सीप सिकेका कामदारलाई मात्रै वैदेशिक रोजगारीमा जान दिने र ७ वटै प्रदेशमा श्रम स्वीकृतिको ...
काठमाडाैं - सरकारले गणतन्त्र दिवसको अवसर पारेर तत्कालिन नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता बालकृष्ण ढुंगेलसहित ८ सय १६ जना कैदीलाई थुनामुक्त गरेको छ । ११ औँ गणतन्त्र दिवसको अवसरमा चालचलन असल रहेको भन्दै सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ढुंगेलसहितलाई आममाफी दिनुभएको हो । ढुंगेल ओखलढुँगाका उज्जनकुमार श्रेष्ठको हत्यामा सर्वोच्च अदालतले दोषी ठहर गरी जन्मकैद भोगिरहेका ब्यक्ति हुन् । सोमबार राती बसेको मन्त्रीपरिषद बैठकले ढुंगेल सहित आममाफी पाउनेहरुको नाम अनुमोदन गरि राष्ट्रपतिसमक्ष अनुमोदनका लागि सिफारिस गरेको थियो । ढुंगेललाई थुनामुक्त गर्न नहुने भन्दै परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले यसबारेको सक्कल फाइल नै मगाएकै दिन सरकारले ढुँगेललाई माफी दिने निर्णय गरेको हो । व्यक्ति हत्याको अभियोग अदालतले पुष्टि गरेपछि ढुंगेलले आफूविरुद...
काठमाडौँ: नेपाल सरकारका अधिकांश मन्त्रीले सम्पत्ति श्रीमतीको नाम राखेका भेटिएको छ । केपी ओली नेतृत्वको सरकारमा मन्त्रीहरुले सार्वजनिक गरेको सम्पत्ति विवरणमा अधिकांशको सम्पत्ति श्रीमतीको नाममा राखेको पाइएको छ। धेरै मन्त्रीले खुलाएको सम्पत्ति विवरणमा पनि श्रीमतीले कमाएको जिकिर गरिएको छ । स्वयम् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको विवरणमा समेत अधिकांश सम्पत्ति श्रीमती राधिका शाक्यको नाममा देखाइएको छ । प्रधानमन्त्रीको कमाइ पनि पत्नीको प्रधानमन्त्री ओलीको नाममा तलब भत्ता वापतको ४२ लाख रुपैयाँ मात्रै एभरेष्ट बैंक लिमिटेडमा रहेको सम्पत्ति विवरण उल्लेख छ । श्रीमती शाक्यको नाममा भक्तपुरको सूर्यविनायक-२ मा डेढ रोपनी जग्गामा २ तीन तले घर, झापाको पृथ्वीनगरमा १० कठ्ठा जग्गा, १८ तोला सुन, माछापुच्छ्रे बैंकमा ४ लाख, प्रभु बैकमा ६ लाख रकम रहेक...
९ जेठ, काठमाडौँ । अकिकांश मन्त्रीको सम्पति न्यून देखिएको छ । अधिकांश मन्त्रीहरुको श्रीमतीका नाममा भने प्रशस्तै सम्पति रहेको छ । त्यो सम्पतिमा श्रीमानको भने योगदान रहेको छैन । ती सम्पतिको स्रोत स्वआर्जन रहेको छ । रक्षामन्त्री इश्वर पोखरेल भन्दा पत्नी मिरा पोखरेल धेरै धनी रहेकी छन्। सबै घरजग्गा श्रीमती पोखरेलकै नाममा रहेको छ। पोखरेलको नाममा झापाको चन्द्रगढीमा १२ कट्ठा पैतृक सम्पति रहेको छ भने नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकमा ७ लाख रुपैयाँ नगद मौज्दात रहेको छ। त्यसैगरी टोखा–६ मा २३ आना जग्गामा बनेको ३ तले घर रहेको छ। भक्तपुर, नगरकोटमा ११ रोपनी ११ आना, धादिङको खानीखोलामा ४ रोपनी पाखो, ७–८ तोला सुन, चाँदी २२–२५ तोला तथा विभिन्न बैंक खातामा ६ लाख ४० हजार रुपैयाँ पनि श्रीमती पोखरेलको नाममा रहेको छ। यि सबै घरजग्गा बिक्री, पेवा र स्वआर्जनबाट प�...
९ जेठ, काठमाडौं । नेपाली महिला पत्रकारको समुह सगरमाथा आरोहण गर्न सफल भएको छ । जेष्ठ ९गते बिहान ६ बजेको समयमा आरोहण दलका सदस्यहरु मेगा टेलिभिजनकी कल्पना महर्जन , नेपाल टेलिभिजनकी रोजिता बज्राचार्य, रा.स.स. की रोसा बस्नेत , स्बतन्त्र पत्रकार देउरालि चाम्लिङ्गको टिम सगरमाथाको चुचुरोमा पुग्न सफल भएको छ । १३ चोटि सम्म सगरमाथा आरोहण गर्न सफल फूर्वा शेर्पा को नेतृत्वमा गएको आरोहण दलका प्रतिनिधि हरु फर्कदै गरेको पर्यटन मन्त्रालयका अधिकृत ज्ञानेन्द्र श्रेष्ठले बताउनु भएको जानकारी नेपाल टेलिभिजनका समाचार प्रमुख राजु सिलबालले टेलिफोन मार्फत आज बिहान ६ बजेर ५० मिनेट जादा बताउनु भयो ।...
९ जेठ, काठमाडौं । चीनले केरूङ-काठमाडौं रेलमार्गको सम्भाव्यताको अध्ययन थालेको छ। रेलमार्गको अध्ययन गर्न चाइना रेलवे फर्स्ट सर्भे एन्ड डिजाइन इन्स्टिच्युटका ८ अधिकारी सोमबार काठमाडौं आएका थिए। रेलवे विभागसँग समन्वय गरी उनीहरूले मंगलबारदेखि काम सुरु गरेका छन्। ‘अध्ययन गर्न केरूङसम्म पुग्छौं, आज ठाउँ-ठाउँमा अध्ययन गर्दैछौं,’ अध्ययन टोली सहभागी विभागका सूचना अधिकारी प्रकाशभक्त उपाध्यायले भने। नेपाल र चीनका अधिकारीबीच वैशाख दोस्रो साता बेङजिङमा यो रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने सहमति भएको थियो। चिनियाँ पक्षले सम्भाव्यता अध्ययन गर्न चाइना रेलवे फर्स्ट सर्भे एन्ड डिजाइन इन्स्टिच्युटलाई नियुक्त गरेको थियो। ‘अध्ययनको सबै खर्च चिनियाँ पक्षले नै ब्यहोर्छ,’ उपाध्यायले भने, ‘अगस्ट (भदौ १५)सम्ममा कम्पनीले प्रतिवेदन दिनेछ,’ उपाध्या...